Izindlu zerente eLondon
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Amakhaya okuhlala Izindlu zekhaya London
I-1-10 yoluhlu lwe-75
I-1 I-Cottage Bed ukuya kwiRente eMpuma London
Siyavuya ukubonelela ngento enye yokulala. Ilitye elilahlekayo kuzo zonke izinto ezilapha ekhaya kunye nokuhamba nje okufutshane ukuya kwilali yaseVictoria. Esi sakhiwo sinikezela ngemigangatho emibini eyahlukileyo ebandakanya igumbi lokulala kunye nendawo enkulu yokuhlambela. Umgangatho weplani yokuvula ekhitshini kunye nendawo yokuhlala. Iyafumaneka ngoku ...
Igumbi lokulala eli-2 liya kuqesha eSutton (london Borough), London
Umnyango wangaphambili othe tyaba: -Entrance HallwayRadiator.Igumbi lokumkela ngaphambili11'6 X 10'9Ingasemagumbini angqengqileyo aphakanyisiweyo sash, indawo yomlilo, ikhabhathi ene-TV Point ukuya kwi-alcove.Igumbi lokwamkela ulwamkelo14'4 X 9'4Ingxaki eyongeziweyo yefestile esash, , ikhabhathi yokugcina imitha ngaphantsi komgangatho, umnyango:
Sutton (london Borough) in London, Kt4 8ba
Published by Connor Prince
umbono Izindlu zekhaya ishicilelwe iintsuku 6 eyadlulayo
I-1 I-Cottage Bed ukuya kwiRomley (eLondon Borough), eLondon
Ithuba elimangalisayo lokurenta eli gumbi likhethekileyo linye elinikwe igumbi lokuhlala elenziwe ngendlela encomekayo ngumnini. Ipropathi ingaphakathi ngokulula kweendlela zebhasi, ivenkile iOrpington. Izibonelelo zokupakisha igadi entle ngasemva. ** igumbi elinye kwigumbi lokulala ezimbini kwigumbi ...
Bromley (london Borough) in London, Br5 4ax
Published by Letzone
I-2 Indawo yokulala i-Cottage Ukuqesha kuMantla eLondon, eLondon
Indawo entle yekotishi eyinxalenye yeyona ndawo yakudala "ye-Bakery endala" ekufutshane neWinchmore Hill Green nesikhululo sayo sikaloliwe saseBritane esibonelela ngeenkonzo kumgca we-Moorgate, kunye nendawo yokuthenga yendawo. Egcwele umlinganiso kunye nomtsalane, indawo yokuhlala enikezwe ngokupheleleyo ...
North London in London, N21 3nf
Published by Peter Graff
I-3 ye-Cottage Bed ukuya kwi-West London, e-London
Iiarhente zeMilestone Estate ziyavuya ukuveza le ndlu sele iguqulwe kabini kwisitayile sendlu yaseWillesden Green, NW10. Ikhitshi elahlukileyo kunye nayo yonke imo yokuhluza kuquka nomatshini wokuhlamba kunye negumbi lokuphumla elahlukileyo. Ezinye izibonelelo ezivela ...
West London in London, Nw10 2qb
IsishwankatheloLokhu kwenziwa kakuhle kwendlu yosapho e-Brentford kunye ne-South Ealing boarding enikezela malunga ne-1150 yendawo yokuhlala. IZiko leDolophu eliQhakazileyo elibanzi liPhakathi kumgama omfutshane onikezela isikhululo seenqwelomoya (umda ophakathi, umda weSithili, iCrossrail ezayo), ...
West London in London, Tw8 9nx
Published by Barnard Marcus - Ealing
I-4 Indawo yokulala i-Cottage Ukuqesha kuMantla eLondon, eLondon
Igumbi lokulala losapho elinobubanzi obunemigangatho emihlanu libekwe kwimo entle ngokubonelela ngegumbi lokwamkela, igumbi lokutyela elahlukileyo, igumbi labahambi, amagumbi amathathu okulala amabini kunye negumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlala losapho elinendawo yokuhlala yokuhlambela eyahlukileyo, kunye negadi engasemva egcinwe kakuhle. Phetha ...
North London in London, N17 8hy
Published by Filey Properties - Hackney
I-2 I-Cottage Bed kwi-Rent e-South London, e-London
Igumbi lokuhlala elinobunkunkqele kunye nendawo ebanzi yegumbi lokuhlala eliseVictoria elalimi kwimbali yelali yaseGreenwich.Ngokuqinisekileyo uya kufumana indawo enkulu yokuphumla okanye isidlo sangokuhlwa esineminyango yaseFrance ngasemva kwegadi. Ngokwahlukileyo kukho ikhitshi ebandakanya umpheki we-hob yegesi, ukuhlamba i-machi ...
South London in London, Se10 9ld